Top 10 Linkedin Pages si aad shaqo ugu hesho Dubai | Tusaha Shaqada
Bogagga 10 ee Xirmooyinka Loogu Talagalay Si Aad Shaqo Ku Heshid Dubai, Maqaalkan, shirkaddayada meel bogagga ugufiican ee la raaco Linkedin si aad shaqo uga hesho magaalada Dubai ee Isutagga Imaaraadka Carabta.
Aaladaha warbaahinta bulshada ayaa noqda hab aad u caan ah oo shaqo looga helo Dubai. Iyo sida aan wada ognahay iyo inta badan dadka ku nool Isutagga Imaaraadka Carabta Emirates waxaad isticmaaleysaa LinkedIn goobaha shaqada si aad shaqo u hesho.
Recently madalkan ayaa ku guulaysatay inuu cusbooneysiisto Meesha ay ka shaqeyso way fududahay haddii aan is barbar dhigno shirkaddan sanado ka hor. Marka si guud ahaan loo hadlo hadaad shaqo raadin ka raadinayso Imaaraadka Carabta waa inaad marka hore raacdaa dhowr bog oo shirkado ah oo ku yaal LinkedIn.
Waxay hubaal ahaan kaa caawineysaa inaad gaarto ugu yaraan dareen wanaagsan oo hadda shaqaaleysiiyay, dabcan, waxaad ka heli doontaa meheraddaada cusub ee aad ka heshay shirkadaha aan hoos ku bixino.
Bogga CareerDubai.net Linkedin waa mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu sarreeya goobaha shaqada ee Dubai. Shirkaddu waxay leedahay muuqaal xiiso leh oo loogu talagalay qurbo-joogayaasha xirfadda leh ee raadinaya shaqooyinka Dubai.
Career Dubai.net waxay maamulaan inay bixiyaan adeegyadooda qaar ka mid ah sumadaha ugu sareeya gobolka Gacanka. Si kastaba ha noqotee, shirkad diiradda saareysa dhammaan qaybaha shaqaalaysiinta ee Dubai tan iyo 2004 oo guud ahaan ka hadashay waxay yaqaaneen sida loo dhiibo Natiijooyinka qoritaanka ee loo shaqeeyaha cusub.
Ujeedada shirkadani waa si looga caawiyo safarada iyo macaamiisha maxalliga ah asal ahaan iyo u shaqaaleysiiya xirfadleyda ugu aqoonta badan UAE.
Boyen Haddin waa a Ururka shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta ee ka socda magaalada Mumbai, Maharastra iyo haysashada wax kabadan 250,039 kuwa raacsan Linkedin. Marka, shirkadani waa mid bulsho ahaan soo jiidasho leh. Shirkadan iyadoo la wado hawlgal qoritaan si loo helo xalka ugu wanaagsan ee suurta galka ah ee xirfadlayaasha ka kala yimid daafaha dunida.
Boyen Haddin la shaqeeyaa shirkadaha ugu fiican Hindiya iyo Dubai. Markaa, fursadaha shaqo ee ay soo bandhigtay shirkaddani waxay ku yaalaan qaybaha kala duwan. Shirkadda ayaa takhasus leh Raadin heer sare ah oo lagu baadi goobayo Dubai. Intaa waxaa sii dheer, shirkadan, waxaad ka heli kartaa latalin guddiga jaanis shaqo iyo jago agaasime, iyo sidoo kale jagada hogaaminta sare ee horumarinta hogaaminta.
Shirkadda gaarka ah ee diiradda saartay iyo gaadhista suuqa Bariga Dhexe waa mid si aad ah u shaqeeya. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay xirfadle xirfad sare leh Tababaraha kooxda Shirkadda Boyen Haddin waxaad dhab ahaan u suurtogelin kartaa loo shaqeeyayaasha inay kugula soo xiriiraan si aan toos ahayn.
Emirates Duulimaadyada / Duulimaadka
Shirkada Imaaraad ee fadhigeedu yahay Dubia. Si kastaba ha noqotee, magaca shirkadda oo dhammeystiran waa Emirates Group. Shirkadduna waxay shaqaalaysaa in ka badan shaqaalaha 103,363 kana soo jeeda jinsiyado ka badan 160. Taasi waa wax ka badan cajiib ah. Shirkadda dhajinta shaqooyinka cusboonaysiinta waxay si joogto ah ugu fidisaa bogga Linkedin. Marka, run ahaantii waxaa mudan in la raaco bogga 'Linkedin'.
Kooxda Emirates Group yeelashada koox HR oo ballaadhan. Waxay yihiin shaqaalaynta adduunka oo dhan. Oo sidaas oo kale, shirkadda kala duwanaanta musharaxiinta caalamiga ah ee ka soo, Koonfur Afrika iyo xitaa Maraykanka
Emirates oo la yiraahdo 'Emirates' oo ka mid ah shirkada caalamiga ah ee ugu weyn caalamka ee Emirates. Dabcan, dhammaan shaqooyinka ay bixiyaan waxaa lagu dari karaa iyada oo loo marayo boggaga internetka ee boggaga shaqooyinka ee LinkedIn ama bogooda internetka emirates.com/careers
Bogaga Diyaaradaha Dubai Linkedin waa fikrad kale oo caqli badan oo la raaco si aad shaqo uga hesho Dubai. Shirkadda ayaa leh oo maamushaa wax badan ganacsi waaxaha. Tusaale ahaan howsha iyo horumarka shirkadda Dubai International (DXB).
Iyo dabcan Dubai International (DXB) waa kan ugu weyn adduunka garoonka. Xaqiiqdii waa shaqaaleysiiyey kumanaan shaqaale ah. Si kastaba ha noqotee, ka dib boggooda bogga 'LinkedIn profile' waxaa lagu soo ogeysiin doonaa shaqooyin kale oo badan iyo sidoo kale Dubai World Central (DWC) tusaale ahaan - hubka mustaqbalka ee adduunka.
Hagaag, Diyaaradaha Dubai shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inay si adag u shaqeeyaan si loogu gudbiyo macaamiisha khibrad heer caalami ah. Marka, shaqooyinka ay bixiso shirkadani waxay noqon kartaa a ilaaliyaha ammaanka, ama wac maamulaha adeegga macaamiisha xarunta. Waajibaadkaaguna waxay ahaan doonaan sugida iyo hubinta in qayb wax ku ool ah ee garoonka ay sifiican u shaqeeyaan.
Shirkadani waa ganacsi gaboobaysi kastaba ha noqotee, si dhakhso leh ayey u kortaa. Shirkadda waxaa lagu aasaasay 1992 oo hoos yimaada magaca Majid Al Futtaim. Tan iyo markaa noqo a urur caan ah waa Bariga Dhexe.
Waxaad ka heli kartaa shaqo sida dukaamaysiga dukaameysiga, wuxuu ku shaqeeyaa bulshada dhexdeeda iyo siyaasadaha HR. Intaa waxaa dheer, ka shaqeeya waaxda tafaariiqda oo xitaa maareeya xarumaha firaaqada ee Bariga Dhexe, Afrika iyo Aasiya. Meel aad u badan ayaa hay'adani ku leedahay Dubai.
Emaar Estate Real
Shaqooyinka Emaar waa nooca Nooca Nolosha ee Dubai. Shirkadda waxaa lagu aasaasay 1997. Iyo fursado shaqo ayaa laga furay dhowr waaxood oo ku kala yaal Dubai iyo Abu Dhabi. Tusaale Isbitaal Ku yaallo Isbitaalka, Dubai iyo Abu Dhabi Suuqyada Dukaanada. Intaa waxaa sii dheer, waxaad kuheli kartaa ikhtiyaariyada ganacsiga Kirada, iyo sidoo kale Madadaalada, iyo Shaqooyinka hormarinta guryaha ee Dubai.
Shirkadda ayaa leh in ka badan kuwa raacsan 563,914 ee ku xidhan Linkedin iyo wixii ka sareeya 20 shaqooyin ay heli karaan qurbejoogta caalamiga ah. Waad ku dhisi kartaa meheraddaada Passion, markaa mustaqbalkiinna cusub la dhis Emaar Real Estate.
Expo 2020 ee Dubai
Waa inaad sidoo kale raacdaa kan rasmiga ah ee 'LinkedIn channel' Expo 2020 Dubai. Dawladda ku sugan Imaaraadka Carabta markasta oo lagu daro shaqooyin cusub oo kanaalkan ah. Marka, raac Expo maadaama aad awoodi karto inaad keento World Expo gobolka adigoo ah maamule dhexe ama maamule sare.
Expo waa bogga kale ee 'Linkedin' oo ka mid ah kuwa ugu sareeya 10 Linkedin bogagga si aad shaqo uga hesho Dubai ama Abu Dhabi. Marka, guud ahaan marka la hadlayo, waa inaad tixgelisaa dalabkaaga mashruucan ka hor intaysan dhammaan.
Kooxda Emaar Hospitality
Kooxda Emaar Hospitality Group waa mid ka mid ah hogaaminta loo shaqeeyayaasha kharashaadka ku baxa Imaraadka carabta. Ganacsigani waa shirkad ay iska leedahay shirkada Emaar Properties PJSC. Joogitaankooda Linkedin waa uun sidii caadiga ahayd. Si kastaba ha noqotee, ururkani wuxuu ku dhex jiraa mid ka mid ah Shirkadaha horumarinta hantida maguuraanka ah ee ugu qiimaha badan adduunka ee Dubai.
Helitaanka shaqo Emaar, nasiibdarro, waa loo baahan yahay in lagu tilmaamo karti la xaqiijiyay oo dhinacaaga ah ganacsiga ganacsiga. Isla mar ahaantaana, waa inaad khibrad maamul u leedahay suuqyada dukaamaysiga iyo tafaariiqda ama hoteelada iyo firaaqada. Taasi runtii waxay kaa caawin doontaa inaad ka hesho wareysiga Imaaraadka Carabta wit Emaar HR maamulaha.
Kooxda Isbitaalka Marti-Emaar ayaa fidinaya isla markaana shaqaalaynaya kumanaan ajaanib ah oo ka kala yimid daafaha dunida. Iyo baahiyaha shaqaaleynta ayaa wali kusii kordhaya musharixiinta caalamiga ah. Marka, haddii aad raadineyso shaqo sidii xirfadle xirfadle ah waa inaad doorataa inaad u socoto Yurub sida xulashada koowaad. Dhanka kale, bariga dhexe waxaa iska leh maamulayaasha iyo Hindiya waxbadan ayeyna u qabtaan doorarka maamulayaasha sarsare sida agaasimayaasha iyo CFO. Si kastaba ha noqotee, Kooxda Cusbitaalka Emaar ayaa hadda ah Huteelka Rasmiga ah iyo Iskaashiga Martida ee Expo 2020 Dubai.
Shirkadda ADNOC Group waxaa laga aasaasay 1971 Abu Dhabi. Waxay sidoo kale noqdaan mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee Linkedin. Ururkani waa u shaqeynta sidii shirkad shidaal qaran. Bog wanaagsan oo ku xiraya bogga 'Injineer' ama haddii aad leedahay xirfado sida waaxda farsamada.
ADNOC waa mid ka mid ah soosaarayaasha tamarta adduunka hogaamiya ee Bariga Dhexe. Maamulayaasha ka shaqeeya qaabaynta Kuwait iyo Saudi Arabia iyo xitaa laga bilaabo Canada iyo Mareykanka. Shirkadda waxay dhaaftay da’deedii 45. Taariikhduna, ADNOC si isdaba joog ah ayey u kortay sannadihii la soo dhaafay. Iyo sumcadda shirkaddaas ayaa sii ballaarinaysa wax ka badan howlaheeda.
Ururkani wuxuu ka kooban yahay in kabadan shirkadaha 18 iyo kaabayaasha waaxda saliida iyo gaaska. Marka, hadaad shaqo raadinayso Bariga Dhexe waa inaad raacdaa ADNOC si hubaal ah. Habka ugu fiican ayaa ah in koonto laga sameeyo Linkedin oo la raaco cusbooneysiintooda loogu talagalay shaqooyinka isku dhafan ee saliida iyo gaaska ee Dubai. Sidoo kale ku dar xashiishyada sahaminta iyo soosaarka, nadiifinta, kiimikooyinka yaryar iyo qaybinta.
Shirkadda ugu fiican ee Duulista / Duulista ee ka socota Abu Dhabi. Shirkadani waa hubaal si fiican looga yaqaan adduunka oo dhan. Etihad Airways waa dowlad ay ku shaqeyso ganacsi hoos yimaada Sharciga iyo siyaasadaha Imaaraadka ee Imaaraadka.
Kaliyayaasha iyo sidoo kale shaqo doonka gudaha waa la soo dhaweynayaa dalbo diyaaradda duulista hawada ee Imaaraadka Carabta. Etihad waxay shaqaaleysiisaa maalin walba. Waxaad shaqo ka heli kartaa adeegga macaamiisha iyo waaxda duulista. Intaas waxaa sii dheer, shirkadan waxay sidoo kale leedahay jagooyin dhowr ah xagga waaxda shaqada iyo waaxda xafiiska.
Shirkadda ayaa timid hab aad u dheer ka hor intaanan u istaagin mid ka mid ah magacyada caalamiga ah ee ugu wanaagsan. Si wanaagsan ayey ula dagaallamaan ilaa bilowga safarka. Iyo guud ahaan marka la hadlayo, shirkaddu waxay ku bilaabatay 2003. Tan iyo markaas waxay ku guuleysatay inay sameyso guulo waaweyn. Qodobka kale ee wanaagsan ayaa ah in maareeyayaashu ay ku faraxsan yihiin inay awood u yeesheen in ay la wadaagaan halyeeyada adduunka malaayiin rakaab ah maalin walbo. Waana hubaal inaad ka hesho qanacsanaanta shaqada waaxaha noocaan oo kale ah.
Gunaanad - Top 10 Linkedin Pages si aad shaqo ugu hesho Dubai
Marka, adoo raacaya boggeena sare ee 10 Linkedin si aad shaqo uga hesho Dubai. Jawaabtu waa haa, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa uun guji oo raac bogagga shirkadooda. Marka kuwan Ururadu waxay soo dhejinayaan dalabyo shaqooyin ah waxaa lagugu soo ogeysiin doonaa boggaaga iskuxirka. Sidoo kale, habka caqliga leh waa in la raaco hashtag oo lagu daro shaqaalaynta iyo shaqaalaynta ee Dubai.
Linkedin waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee shaqo doonka ah. Taasi waa dhab, marka waa inaad tixgelisaa inaad isticmaasho astaantaada warbaahinta bulshada ee loogu talagalay shaqo raadin ujeedooyin. Hadana hadaan ka hadlayno Imaaraadka Carabta. Linkedin waa mid caan ka ah wadankeena. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaan kuu rajeyneynaa shaqo raadin mustaqbalka Dubai iyo Abu Dhabi.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa tilmaamo wanaagsan shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Shaqooyinka ku yaala Dubai. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, tabaha iyo shaqaalaynta ee United Arab Emirates oo leh luqaddaada.